Aluminum Window, Aluminum Door, Aluminum firaka Window, Aluminum firaka Door - Renshi
Shanghai Renshi varavarana & Windows Co., Ltd dia matihanina mpanamboatra sy ny mpanondrana ny varavarankely sy ny varavarana izay efa fikarohana ao amin'io sehatra io nandritra ny 15 taona. Ny vokatra andalana dia miely amin'ny varavarankely sy ny varavarana aluminium, aluminium louver, sy dobo fitaratra balustrade fefy, sns Ny tsena lehibe indrindra no Aostralia, Nouvelle-Zélande, Amerika sy Eoropa.
Ny manan-karena traikefa eo amin'ny fanamboarana, ary manondrana isika, dia afaka manome azo atao famolavolana drafitra rehetra karazana trano fonenana sy ny trano ara-barotra. Ankoatra izany, eo ambanin'ny fenitra hentitra, ny kalitao sy ny asa fanompoana azo antoka. Izany no antony efa nandresy mora laza sy ny mpanjifa maneran.
Isika handray amim-pahatsorana sy ny hery anaty mpanjifa amin'izao fotoana izao mba hifandray antsika ho amin'ny hoavy orinasa mifototra amin'ny fiaraha-mientana ifampizarana soa!
Mangataka ny notsongaina -tserasera
Mifidiana fomba tonga lafatra ny tsara indrindra ho ravaky ny an-tranonao.
No.135 Yanda Road, Huinan Town, Pudong New District, Shanghai, Shina